LKML: Linux 5.3 rc5, usbuuc cusub, musharax cusub | Laga soo bilaabo Linux
LKML: Linux 5.3 rc5, usbuuc cusub, musharax cusub
LKML way soo noqdeen si ay u siiyaan fariin kale oo xiiso leh usbuucaan cusub. Horumarku ma joogsanayo, oo wuxuu ahaa abuuraha Linus Torvalds, sidii caadada u ahayd, kaasoo ku dhawaaqay Murashaxan sii-deynta cusub, taas oo ah, nooca murashaxa cusub inuu noqdo nuqulkii ugu dambeeyay Linux 5.3 kernel bilaash ah. Linux-kan cusub ee 5.3 rc5 wuxuu la yimid raad aad u yar. Waxaad horeyba u ogayd in rc hore uu aad u yaraa, rc4 aad buu u weynaa hadana wuu yaryahay markale sababtuna tahay qaddarka koodhka ee la badalayo xaalad kasta ...
Laakiin iyadoon loo eegin taas, taas oo caadi u ah wareegga horumarka, wax walba waxay umuuqdaan inay sifiican udhaceen. Ma jiraan wax la yaab leh oo ku dhacay in laga walwalo mooyee in yar oo kuus kuus ah oo aan lahayn gargaar la'aan aad u tiro badan. Hadda waad kala soo bixi kartaa, ku habeyn kartaa oo ku soo ururin kartaa qaybtaan bogga rasmiga ah ee kernel.org, haddii ay dhacdo inaad rabto inaad tijaabiso astaamaheeda cusub inkasta oo, sidaad horeyba u ogayd, ay fiicnaan lahayd inaad sugto nooca ugu dambeeya ee Linux 5.3 haddii aad rabto inaad u haysato isticmaalka joogtada ah ee kaamkaaga . Sidan ayaad sidoo kale ku soo sheegi doontaa dhibaatooyinka laga yaabo inaad la kulanto inta lagu jiro isticmaalka oo aad wax yar iskaashi la sameyso si loo saxo ka hor bilowga ugu dambeeya ...
Sida warka, runtu waxay tahay inay jiraan isbeddelo badan oo ay ku darsadeen horumariyeyaal badan. Qaar ka mid ah xusid mudan waa hagaajin wadayaasha USB, dhawaq, NVMe, rdma, iwm Dhamaantood iyo inbadan ayaa lagu hagaajiyay rc-kan cusub. Intaa waxaa sii dheer, feylasha furaha ee u dhigma qaab-dhismeedka ay taageerto kernel ayaa la cusbooneysiiyay, sidii caadiga ahayd.
Isbedelada ka mid ah, kuwa lagu sameeyay x86 iyo loogu talagalay ARM64. Dabcan, sidoo kale waxaa jiray cilado qaarkood oo go'an oo ku saabsan nidaamka faylka ama darawallada FS. Gaar ahaan AFS iyo Btrfs. Waxay sidoo kale leedahay arrimo HyperV go'an oo saameynaya qaybtan ka mid ah hufnaanta, iyo mid aad u dheer iwm.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » LKML: Linux 5.3 rc5, usbuuc cusub, musharax cusub
Javier AM dijo
Aaway xariirinta soo dejintu?
Jawaab Javier AM
Hagaag, sidii had iyo jeerba, shabakada kernel.org sidaan ku tilmaamay ...
Baarayaasha ayaa ku qaaday weerarada Dos shabakada Tor si loo yareeyo waxqabadkeeda